Offshore Banking neKurongwa Kwekambani, Matanho, Asset Protection Plans
100 yeMamiriyoni eDhora Yakachengetedzwa
Pamusoro peOffshore Magisheni
Offshore Account: Sei uye Sei
Chengetedza Nhaka Kubva Pamutemo
Sei Uchisarudza OffshoreCompany.com?
Mukurusa kune wekunze kune imwe nyika mupasi rose
Zviri nyore kunzwisisa mavhidhiyo
Makambani ekukurumidza kune dzimwe nyika uye nhoroondo
Kuvimbika, kuvimbika, kuvimbika
Vashandi vane ruzivo vanokuchengetedza nguva
Yakawanda yekukwikwidza mitengo pasi rose
24 / 7 inogara-munhu
Kusununguka kwebasa rekushandira kunze
Vapedzeri venguva yakazara vatsigiri
Inotanga Offshore Corporations,
LLCs, Trust, uye Account Accounts.
Mitemo yakasimba yega yega yega neyekunze kwebhishopu yehurumende inobvumira kuchengetedza mari pamwe chete nekuchengetedzwa kwemari kubva kurambana, vatengi, kutonga uye kutongwa.
Kugadzira kambani yekunze uye / kana kutamisa chikwata chenyu chekushandira kune imwe nyika yepamhenderekedzo yegungwa kunogona kuva danho rinokosha mukuchengetedza zvinhu zvako kubva pamhosva dzemhosva, Mukuwedzera, iwe unogona kukwanisa kushandisa michina yepamitero yepamitemo uye kukura mari yako kune dzimwe nyika. Iyi webhusaiti yakavakirwa pamakore ekutsvakurudza uye inogadzirirwa semudzidzisi unogona kukutungamira nhanho-nhanho pakuumba nekushandisa "kambani yekunze." Uchawana zvikomborero zvakawanda zvekugadza sangano renyika yose nekushanda bhizinesi rako vachishandisa bhangi yebhangi yekunze panzvimbo ye, kana kuti pamwe nekambani yemunharaunda. Nevis, Cayman Islands, Panama, BVI neHong Kong, somuenzaniso, vose vane kodzero dzakakurumbira zvikuru. Nokudaro, tinogona kukutungamirira pakugadzira sangano kana LLC yezvaunosarudza. Zvadaro, tinogona kukubatsira kuti ugadzire bhangi yebhangi yebhizimisi rako uye ugadzire hofisi yepamhenderekedzo yegungwa.
Nevis LLC mutemo unopa zvimwe zvakasiyana-siyana uye zvinobudirira zvekuchengetedza zvinhu zvakachengetedza kuchengetedza kumadokero kwebhengi mabhuku kubva pamhosva.
Dana Kuti Usabhadharana Nekuda
Isai Zvinyorwa Zvako
Kambani yeNyika neBhangi Yakasvinudzwa
Kujekesa, kuita bhizinesi kubva kune imwe nyika hakusi nezvekudzinga mitero kana kuchengeta mari kubva kuhurumende. Asi, ndezvekugadzirisa zvinhu zvako nenzira yekushandisa zvakanakisisa mitemo yemunharaunda uye yepasi rose. Mitemo iyi inowanikwa kune ani zvake anofarira kuvashandisa kuti vabatsirwe. Nokudaro, tinogona kukuratidza nenzira yakakwana yepamutemo uye nzira dzakarurama dzekugadzira bhizinesi rako munyika yose kuitira kuti iwe unzwisise zvikwereti zvakasvibiswa nekuchengetedzwa kwemari kune mari yekuchengetedza.
Vanhu vari muU.S., UK, Australia uye nedzimwe nyika,, pamwe chete, vanobhadhara pasi rose mari yaunowana. Kune rumwe rutivi, iwe unogona kunge uchiziva kuti Apple, Google nevamwe vakaderedza mitero yavo yemitero vachishandisa nzira dzepamutemo zvakakwana kuburikidza nekushandiswa kwezvivakwa zvekunze kwemhirizhonga. Uyezve, kune imwe nzvimbo yekutengesa bhendi yunivhesiti imwe yerimwe nzira iyo vatengi vedu vakagadzirisa zviri pamutemo mabhiriro avo emitero pasi pe IRC 953 (d) uye 831 (b). Saizvozvowo, kune nzira dzekuti iwe unogonawo kuita izvi zvakare, nekubatsira kwedu pamwe nekutungamirirwa kwevadzidzisi vane mvumo yakakodzera.
Hatikwanise kusimbisa pfungwa yekupedzisira yakakwana. Offshore mitero yezvikwereti inzvimbo dzakaoma zvikuru dzemutemo. Saka, musati mava kushandisa mazano emarudzi ose ekubhadhara mitero, iva nechokwadi chokuti hausi kungotaura chete neCPA ipi. Taura neAcantant uye / kana muteresi wemutero anoona kubatsira vanhu uye vagari vemunyika. Iwe uri mukana wakawanda wokupfuura kupereta nekubhururuka mavara. Uyezve, iwe ucharara zviri nani usiku, zvakare.
Imwe nzira yakanakisisa yekubudirira ndeyokushandisa kune imwe yekambani yekunze yekushandisa bhizimusi rako rekuInternet. Ichowo inzira inoshandiswa naApple neGoogle. Kana bhizinesi yako iri paIndaneti uye iwe unoshandisa kambani yako yepasi rose zvakakodzera, saka, inogona kunge iine humwe hunodiwa huripo mutero. Izvi zvinogona kukanganisa mitero yemitero, yakafanana neIRA, somuenzaniso. Zvinonyanya kukosha kuti uve nemazano emitero eCPA ane ruzivo uyo anogona kukutungamirira mukushandiswa kwegadziriro iyi. Kushandisa kwezvinhu izvi kuchengetedza mari pamitero kunogonawo kuvimba nenyika yako yekugara uye vagari venyika uye yako muzana wehuyo hwekambani, pakati pevamwe vatambi. Saka, inofanira kushandiswa chete pasi pekutungamirirwa kwemazano emitero.
Bhizinesi rekuInternet rinogona kuva nevatengi pasi rose. Semuenzaniso, unoda here kuwedzera vateereri vako ne22 nguva? Vagari vasiri kunze kweUnited States vane huwandu hunopfuura 22 kupfuura mukati. Nhamba yepasi pose kunze kweku UK ndiyo 109 nguva huru kupfuura mukati, 200 mukuru kunze kweCanada uye nguva 304 kunze kweAustralia. Iwe unowana pfungwa. Sei uchifanira kuzviisa kune imwe yekare yefashoni yemabhizimisi maitiro? Nekudaro, kusimbisa kambani yekambani neyebhangi yebhishopu yekunze kuendesa bhizinesi rako rekuInternet kunogona kuva nzira yakanakisa yekuvaka kuwedzera kunze kwenyika yaunogara.
Maminitsi mashomanana ekunyora mutongo, gweta rinogona kuisa imwe dhidhiro kusvibisa bhangi yako yebhangi, imba yako, bhizinesi rako, uye zvimwe zvinhu. Zvisinei, kushanda bhizinesi kumhenderekedzo yegungwa kunogadzirisa dambudziko guru kumunhu anonyanya kutarisana nemascosti ekukanda uye kubata pfuma yako yakaoma yakawanikwa.
Zvakadini kana kambani yako yomunzvimbo inopinda munguva dzakaoma? Yeuka US uye Europe yekuderera kwe2008, 2009 uye makore anotevera? Munguva iyoyo hupfumi muSouth-Asia Asia neAustralia zvaiwedzera. Nokuva nemichina yemari yekunze, iwe unogadzirisa kutarisa kwako kune hupfumi hwemunharaunda.
Wadii kuva nemabhizinesi epamhepo akawanda epasi rese anomhanya panguva imwe chete?
Iyo yakaderera mutengo yekutanga huwandu hwemakambani emakungwa uye maakaunti, pamwe chete nemutengo wakaderera-webhusaiti webhusaiti services inoita kuti yekutanga investimendi ingodonha mumugomo kana ichienzaniswa nekukwira kwakanyanya padivi. Sangano redu rinopa zvese izvi masevhisi, uye rine makumi ezviuru zvevatengi. Kana murimi achida kukohwa chirimwa anofanira kutanga adyara mbeu. Hadzisi dzese mhodzi dzinokura asi dzakawanda dzadzo dzinokura; uye izvo zvinoita zvinogona kumuita iye nemhuri yake kurarama kwezvizvarwa zvakawanda.
Kambani yakatanga mu1906. Isu tinoshushikana nebasa rezvemari yekunze uye kuchengetedzwa kwemari kubva kumhosva. Sangano redu rakaunza mitemo muNevis, Cook Islands neDominica. Aya mazano emakambani edu ekukurukurirana nguva dzose nemakurukota ehurumende kuti atungamirire mutemo mune zvakanakisisa zvevatengi vedu.
Isu Tinonyora Mirairo
Offshore Kambani yakabatsira mutemo muNevis, iyo Cook Islands, Dominica neCongo. Tinosangana nguva dzose nevakuru vedunhu kuti vavandudze maitiro avo ehutongi.
Wedu Mukuru WeVance Amory, Mutungamiri weNevis (1992 - 2006 uye 2013 - 2017)
Mutungamiri wedu Ne Roosevelt Skerrit, Prime Minister weDominica
Mutungamiriri wedu naClément Mouamba, Mutungamiriri weRepublic of Congo (Brazzaville) uye Gweta Redu Yonathan Amselem
Wedu Mukuru NaMark Brantley, Mutungamiriri weNevis (2017-Present)
Basa guru, ndinovonga nekuda kwebasa rako rose.
Ndinongopedza mafomu eIndaneti uye zvinyorwa zvangu zviri kunyorwa neyanyanzvi vane mazano ekubhadhara.
Unoda kutaura kuti ndakanyatsogadziriswa nehutano hwebasa. Exceptional !!! Takagamuchira zvinyorwa zvekambani neEIN uyewo tsamba yekubvumirwa kubva kuhofisi yeGavhuna mangwanani ano. Haikwanisi kufara. Ini ndichaita kuti munhu wese azive kuti iwe uri wekambani huru. Ndatenda, Ron & Roxy A.
Ndichishandisa mabhizimisi emabhizimusi ebhizimisi, ndakachengetedza mari yangu yebhizimisi uye zvigadzirwa zvemunhu kubva pamhosva inoparadza.